IGreen Note 9 iboniswe nge-9 ka-Agasti | Iindaba zeGajethi
Sithethile iinyanga ezininzi malunga nokucaciswa okunokwenzeka ukuba ukugqwesa kwe-phablet par yenkampani yaseKorea iSamsng izakusinika. Amarhe okuba iSamsung inakho ukuqhubela phambili umhla wokungeniswa kweNqaku 9 uqinisekisiwe ngokusemthethweni. Imihla ethathelwa ingqalelo yayiyeye-2 okanye ye-9 ka-Agasti, le yokugqibela ingulowo ukhethwe yinkampani.
Nge-9 ka-Agasti, i-Samsung izakubamba umsitho okhethekileyo eNew York apho izokwazisa ngokusesikweni i-Galaxy Note 9. Lo msitho uza kubanjelwa kwiziko iBarclays elikummandla waseBrooklyn kwaye liza kuqala ngentsimbi ye-11: 00 ngexesha lendawo, u-5 emva kwemini ngeSpanish. Ukusuka kwiActualidad Gadget siza kukunika zonke iinkcukacha zomsitho.
Okwangoku, asinakuqinisekisa ukuba inkampani yaseKorea i-Samsung iya kuwusebenzisa lo mcimbi thaca nasiphi na isixhobo esongezelelweyoNjengoko inokuba yiGear S4 smartwatch, isiphelo sendlela esipapashe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iya kuba nebhetri engama-470 mAh, 90 mAh kuneGear S3 kunye neMidlalo yeGear. Esi sigxina siya kuqhubeka silawulwa yiTizen, akukho Android Wear njengoko bekukhohlisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngokubhekisele kwiGalaxy Note 9, ukuba amahemuhemu aqinisekisiwe, anokufikelela kwimarike Imibala emi-5 eyahlukeneyo, ngombala omdaka ngombala omtsha onokongezwa kwezi sele zikho. Ikhamera ezimbini ezingasemva ziya kuhlala zikwindawo efanayo neNqaku 8, ngenxa yobungakanani be Ibhetri iya kwanda ukusuka kwi-3.300 mAh yeNqaku 8 ukuya kwi-4.000 mAh. Ewe, isivamvo somnwe siya kubekwa nje ngezantsi kweekhamera zombini, ukunqanda ukugxeka okufumene inkampani ngokubeka ngqo kwiikhamera.
Ukuba ufuna ukulandela umcimbi, Isamsung isinika ithuba lokubona bukhoma ntetho kuluntu lwesiphelo kuphela kwimarike esibonelela ngosiba olulungelelanisiweyo kwiscreen sesiphelo kunye neempawu ezinokusinika zona xa sisenza kwaye sabelana ngomxholo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IGreen Note 9 iboniswe nge-9 ka-Agasti
I-NASA ifezekisa ukuba nayiphi na inqwelomoya inokufikelela kwi-70% ngokuzola